HomeWararka Ciyaaraha MaantaTottenham Hotspur oo soo bandhigtay qiimaha ay ku dooneysa Harry Kane
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay diidi doonto inay ka hadasho bixitaanka xagaaga ee Harry Kane haddii aysan helin dalab ka badan 150m oo ku saabsan weeraryahanka reer England.
Mustaqbalka 27 jirkaan ee Tottenham Hotspur Stadium ayaa haatan shaki ku jiraa, iyadoo kooxaha sida Manchester United , Manchester City iyo Chelsea dhamaantood la sheegay inay xiiseynayaan kabtanka England.
Kane ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku jira Spurs xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 31 gool isla markaana diiwaan geliyay 16 caawin 46 kulan oo uu ciyaaray, laakiin kooxda ka dhisan Waqooyiga London ayaa markale soo afjari doonta ololahan koob la’aan.
Sida laga soo xigtay The Sun , Tottenham waxaa ka go’an inay ceshato xiddigooda isla markaana aysan xitaa marti gelin doonin dalabyo ka yar £ 150m inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
wararka ayaa sheegaya in Man City ay noqon doonto kooxda kaliya diyaar u ah inay bixiyaan in ka badan £ 100m, laakiin Pep Guardiola ayaa dhankiisa xiiseenaya Erling Braut Haaland .
Kane, oo dhaliyay 219 gool 333 kulan oo uu u saftay kooxda Tottenham tan iyo markii uu soo shaac baxay sanadkii 2009, wali wax ka badan seddex sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa haatan.